यी हुन् प्रचण्ड सरकारका महत्त्वपूर्ण काम – tvNEPALI
Posted on ११ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ०१:१८ May 25, 2017
काठमाडौं, ११ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सत्तासाझेदार कांग्रेससँगको भद्र सहमति पालना गर्दै राजीनामा दिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेका कामहरूको विषयमा संसद्लाई जानकारी गराएर राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए । तर, प्रतिपक्षी एमालेले तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि उनले सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाटै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तासाझेदार कांग्रेससँगको समझदारीअनुसार आफूले राजीनामा दिएको बताए । ‘नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ संकल्प गरेको छु । नेपाली कांग्रेसस“ग भएको समझदारी अनुसार नै अगाडि बढ्दैछु’, उनले सम्बोधनका क्रममा भने । नागरिक र सांसदको रुपमा मुलुक र जनताको उत्थानका लागि निरन्तर लागिरहने भन्दै प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनुपर्दा कुनै पीडावोध नभएको पनि बताए । ‘सत्ता छाड्न पर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञ, सांसद र नागरिकका रुपमा मुलूक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु,’ उनले राजीनामा घोषणा गदै भने ।
मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिस्क घात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि एक लाख सम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था प्रचण्ड सरकारका पालामा भएको छ । मृगौला रोगीहरुको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भएको छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
ओलीलाई प्रचण्डको जवाफ :
म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा एकथरि साथीहरू (एमाले)ले संसद्मा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ‘फास्ट ट्र्याक के हुन्छ ? ओबिओआर के हुन्छ ? हुलाकीमार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन् । तर, सोध्नेहरूको नियत सही थिएन । त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो, चुनौती थियो । आफैँमाथि विश्वास नभएपछि मान्छेलाई अरूमाथि पनि विश्वास नहुँदो रहेछ ।
फास्ट ट्र्याकका विषयमा त सरकारमाथि नियोजित दुस्प्रचारको अभियान नै चलाइयो । आज म जवाफ दिँदै छु, अहिलेसम्म केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय भएको र कसैले खास प्राथमिकतामा नपारेको फास्ट ट्र्याक अब बन्ने ग्यारेन्टी भयो । राजधानी र तराईबीचको दु्रतमार्ग अब सुनिश्चित भयो । केही दिनमै म त्यसको शिलान्यास गर्दै छु र सेनाले बनाउँदै छ ।
मधेसको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन नै बदल्ने दूरगामी महत्वको हुलाकीमार्ग पनि अहिले तीव्र गतिमा बनिरहेको छ । मैले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमै प्राथमिकताका साथ उठाएपछि नै हुलाकीमार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको हो । अब मधेसको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कायापलट हुँदै छ । काकाकुल राजधानीले वर्षौँदेखि देखेको मेलम्चीको पानीको सपना दसैँअघि नै पूरा हुने भएको छ ।
भद्र सहमतिको शृंखला
ओली सरकारको वर्र्हिगमनसँगै काग्रेस–माओवादी नयाँ गठवन्धन निर्माण भयो । त्यसवेला देउवा–प्रचण्डबीच थप अर्काे भद्र सहमति पनि भयो । स्थानिय तहको चुनावसम्म प्रचण्ड र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव देउवा प्रधानमन्त्री भएर गर्ने दुई दलबीच भद्र सहमति भएको थियो । तर भद्र सहमति पालना हुँदैन भन्ने आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी तोडनका लागि आफुले राजनामा दिएको घोषणा गरे ।
यसरी गर्दै छन् देउवाले नयाँ सरकार गठनको पहल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामासँगै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने भएका छन् । उनले बिहीबार ठूलो दलका नेताको हैसियतले संसद्मा रहेका दलहरूलाई पत्र पठाएर सरकार गठनमा सहयोगको आह्वान गर्दै छन् । यद्यपि, सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना न्यून छ । ३१ जेठको दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै नयाँ सरकार गठन हुने देउवाको विश्वास छ । ‘नयाँ सरकार गठन निर्वाचनपछि जाने सम्भावना नै छैन,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले भने ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि एमालेले संसद् अवरोध गर्ने
सरकारले सहमति भंग गर्दै संविधान र कानुनविपरीत स्थानीय तहको संख्या थप गरेको आरोप लगाउँदै एमालेले संसद् अवरोधको नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ । बिहीबार सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अवरोध गर्ने नीति एमालेले अख्तियार गरेको हो । ‘थपिएका स्थानीय तहको संख्या फिर्ता, टीकापुर काण्डको मुद्दा, प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोगलगायतका निर्णय फिर्ता नभए बैठक अवरुद्ध गर्ने स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।
Posted in मुख्य समाचार Tagged प्रचण्ड, सत्ता साझेदारी, सरकारका महत्त्वपूर्ण काम
कानेपोखरीमा धिमाल र बेलबारीमा राईको उमेद्वारी